श्रीमान्‌ले नै लगाए आगो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रीमान्‌ले नै लगाए आगो
खर्च अभावमा उपचार हुन सकेन
भाद्र १८, २०७५ अर्जुन राजवंशी
दमक — मट्टितेल खन्याएर श्रीमान्ले लागो लगाउँदा झापा कमल गाउँपालिकाकी एक महिला गम्भीर घाइते भएकी छन् । आगाले उनको ४० प्रतिशत भाग जलेको चिकित्सकले बताए ।
कमल ५ पाडाजुँगीका भक्तबहादुर दर्जीले श्रीमती लीलामायालाई मट्टितेल खन्याएर आगो लगाएका हुन् । लीलामायाको कम्मरदेखि माथि सबै जलेको छ । उक्त घटना भदौ १२ गते राति भएको हो ।
घरायसी विवादमा भक्तबहादुरले श्रीमतीलाई मट्टितेल खन्याएर आगो लगाएको इलाका प्रहरी दमकका डीएसपी श्यामलकुमार सुब्बाले बताए । भक्तबहादुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
गम्भीर घाइते लीलामायाले अहिलेसम्म उचित उपचार पाउन सकेकी छैनन् । आर्थिक अभावका कारण ४ दिनसम्म उनलाई कहाँ लगेर उपचार गर्नेमा आफन्त दोधार देखिए । अवस्था गम्भीर भए पनि उनको उचित उपचार हुन सकेको छैन ।
घटनालगत्तै लीलामायालाई प्रहरीको सहयोगमा बिर्तामोडस्थित ब एन्डसी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनको कुरुवाका रूपमा माइतीपट्टिका दाजु टीकाराम ठटाल छन् । ठटाल भुटानी शरणार्थी हुन् । अरू कोही आफन्त नभएको र दाजुको पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उपचार सम्भव नभएको हो ।
बिरामी भर्ना भएको २ दिनसम्म पैसा बुझाउन नसकेपछि बीएन्डसीले त्यति बेलासम्मको खर्च छुट गरेर अन्यत्र लान रेफर गरेको थियो तर, एम्बुलेन्स भाडासमेत नहुँदा दाजुले सिकिस्त बहिनीलाई शरणार्थी शिविर लिएर गएका थिए ।
भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीका सचिव टीकाराम रसाइलीको पहलमा आम्दा अस्पताल दमकमा भर्ना गरिएको थियो तर बिरामीको अवस्था गम्भीर रहेकाले आम्दामा उपचार सम्भव नरहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नवीन ढकालले बताए । ‘बिरामीको अवस्था हेरेर हामीले तत्काल धरान रेफर गरेका थियौं,’ डा. ढकालले भने, ‘तर पैसा छैन भन्दै उहाँहरूले बिरामीलाई लग्नुभएको छैन ।’
बिरामीको ४० प्रतिशत भाग जलेकाले तत्काल विशेष उपचार आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘घटनालगत्तै आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्नेमा भ्यानमा बिरामी राखेर यताउता घुमाउँदै बितेको छ,’ डा. ढकालले भने, ‘बिरामीको उचित उपचार नहुँदा जलेको घाउमा संक्रमण हुने सम्भावना देखिएको छ ।’
लीलामाया भक्तबहादुरकी सातौं श्रीमती रहेको डीएसपी सुब्बाले जानकारी दिए । लीलाको पनि यो दोस्रो विवाह हो । उनीहरूका छोराछोरी छैनन् । यो परिवार अति विपन्न हो । घरमा भक्तबहादुरका वृद्ध बुबा मात्र छन् ।
‘बाँच्ने अवस्थाको बिरामी पनि उपचार नपाएर ज्यानै जाला भन्ने डर भइसक्यो,’ शिविर सचिव रसाइलीले भने, ‘आफन्तले एक पैसा छैन भनिरहेका छन् । खोइ कसरी कहाँ लगेर उपचार गर्नु ?’ लीलामाया पनि भुटानी शरणार्थी परिचयपत्रबाहक हुन् । उनका पहिलो श्रीमान्तर्फ दुई छोरा छन् ।
चर्को गर्मीका बेला आगाले जलेको बिरामी आईसीयूबाहिरै उपचारविहीन अवस्था देखेपछि दमकका रुद्रप्रसाद गौतम र विमल शर्माले खर्च दिएर शनिबार धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लाने व्यवस्था गरिदिएका थिए । घटनालगत्तै कमल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरे पनि अहिलेसम्म कुनै सहयोग प्राप्त भएको छैन ।
‘उहाँहरूले सहयोगको आश्वासन मात्र दिनुभयो । अहिलेसम्म केही सहयोग पाएको छैन,’ डीएसपी सुब्बाले भने, ‘मैले गाउँपालिका उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसँग सहयोग मागेको थिएँ ।’ मट्टितेल खन्याएर आगो लगाउने भक्तबहादुरलाई ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गतको मुद्दा चलाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:२९
एकीकृत खेतीमा किसान
परिवारमा खेती गर्नेको संख्या घटेपछि एकीकृत खेती गरिँदै
जमिनको उत्पादकत्व बढ्यो
भाद्र १७, २०७५ अर्जुन राजवंशी
गौरादह (झापा) — जिल्लाका किसान एकीकृत खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । परिवारमा खेती गर्नेको संख्या घट्दै गएपछि किसान एकीकृत खेतीतर्फ लागेका हुन् ।
एकीकृत खेती गर्दै आएको झापाको गौरादहस्थित नमुना एकीकृत सहकारी खेतीको गोदाम र कार्यालय भवन । तस्बिर : अर्जुन
गौरादह नगरपालिकास्थित महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले एकीकृत खेतीलाई प्रवद्र्धन गरेको छ । संस्थाले नमुना एकीकृत सहकारी खेती र जागृति एकीकृत सहकारी खेतीमार्फत सामूहिक खेती प्रणालीलाई विकास गरेको हो ।
सहकारीले हाल एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा एकीकृत खेती गर्दै आएको छ । स्थानीय ९० किसानबाट २५ वर्षका लागि खेत भाडामा लिएर सामूहिक खेतीलाई अघि बढाएको सहकारीकी अध्यक्ष मीना ढकालले बताइन् । एकीकृत खेती ०७१ देखि गर्दै आएको उनले बताइन् । एकीकृत खेती प्रणालीका कारण किसानको जमिनको उत्पादकत्व बढेको छ । खेती भाडामा लिँदा ४ पीएच अम्लियनपन रहेकोमा हाल बढेर ५.५ पीएच पुर्‍याएको नमुना एकीकृत सहकारी खेतीका अध्यक्ष बेधनिधि चापागाईंले बताए ।
विगतभन्दा एकीकृत खेतीबाट किसानले आम्दानी राम्रो पाउने गरेका छन् । किसानले एकीकृत खेती प्रणालीमा रोजगारी समेत पाएका छन् । किसानले खेत भाडामा दिएबापत वार्षिक प्रतिबिघा ३२ मन धान पाउने गरेका छन् ।संस्थाले ‘एक घर एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छ ।
खेती संस्थालाई दिएपछि दैनिक काम गर्न इच्छुक किसानलाई संस्थाले प्रतिघण्टा ५० रुपैयाँका दरले हाजिरा समेत दिने गरेको छ । वार्षिक एक सय घण्टा काम गर्ने किसानलाई श्रमबोनस १० प्रतिशत र सेयर बोनसबाट ४० प्रतिशत नाफा बाँड्दै आएको छ । संस्थाले किसानका साना–साना टुक्रा खेतलाई जोडेर चक्लाबन्दी गरेको छ ।
संस्थाले चक्लाबन्दीअन्तर्गत १० बिघाको एउटा फाँट बनाएको छ । समान रूपमा सिँचाइ पुग्ने गरी खेत सम्याएको छ । खेतमा आधुनिक मेसिनरीका सामान पुग्नेगरी बाटो बनाइएको छ ।
संस्थाले खेत बाँझो राख्ने अवस्थालाई शून्यमा झारेको छ । दुई बाली धान खेती गर्ने गरेको छ । त्यसबाहेक मकै, गहुँ, तोरी र घाँस खेती गर्दै आएको छ । सहकारीले सामूहिक गाईपालन पनि गरेको छ । संस्थाले माछापालन पनि गरिरहेको छ ।
किसान महिला दिदीबहिनीलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले संस्थाले नमुना अचार उद्योग पनि सञ्चालन गरेको छ । ‘अधिकांश किसानका छोराछोरी विदेश गएका छन् । स्वदेशमै भएकाहरू पनि पढेलेखेर राम्रो जागिरे भएका छन्’, किसान हेमनाथ घिमिरेले भने, ‘गाउँमा खेती गर्ने मान्छे नै छैनन् ।
कसैलाई अधिया दिँदा पछि मोहियानी लाग्ने डर । त्यसैले संस्थालाई खेत दिने किसान बढ्दै गएका छन् ।’ संस्थालाई खेती दिँदा राम्रो भएको किसान तुलसीराम ढकालले बताए । ‘हामीले धेरै माटो त दिएका छैनौं । तर, संस्थालाई खेती दिँदा राम्रो भएको छ । वार्षिक रूपमा मूल्यांकनअनुसारको आम्दानी दिएको छ ।
नाफा पनि बाँढेको छ । सबैभन्दा राम्रो खेतको अवस्था सुध्रिएको छ,’ उनले भने । एकीकृत खेती प्रणाली जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि विस्तार हुने क्रममा छ । जिल्लाको कचनकवल गाउँपालिकामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धान सुपर जोन क्षेत्रमा पनि एकीकृत खेती अघि बढाउन किसान छलफलमा जुटेका छन् । परियोजनाले एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानलाई आधुनिक प्रणालीअन्तर्गत खेती गर्न अनुदानसहितको सहयोग गर्दै आएको छ ।
‘आधुनिक मेसिनरी प्रयोगबिना अब खेती गर्ने विकल्प छैन । त्यसका लागि चक्लाबन्दी खेती निर्विकल्प छ,’ सुपर जोन एकाइका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिम्सिनाले भने, ‘ठूलो संख्यामा चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्नलाई एकीकृत खेतीमै जानुपर्छ । हामी यसका लागि निरन्तर छलफलमा छौं ।’
प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:०६